China Self Adhesive Rubber Strip orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Tianzheng
Ny fantsom-pirinty mametaka tena dia vita amin'ny akora mahazatra an'ny EPDM, ary misy kasety hafa apetaka ao ambadiky ny kiran'ny spaonjy. EPDM fingotra dia manana tombony maro, toy ny fanoherana ny toetr'andro tena tsara, fanoherana fahanterana, fanoherana ozonina, fanoherana ny asidra sy alkaly.
Ny fotoana itarihantsika hamatsiana tsipika fingotra ara-barotra tsotra dia 7-10 andro. Ny volo vita amin'ny kofehy fampidirana adhesive dia 10-15 andro, na izany aza dia malefaka sy miara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra antenain'izy ireo.
Temperature Range tsara
Fananana akustika tena tsara
Insulated termaly tsara
Fananana famehezana tsara (fifindra-monina amin'ny rivotra, vovoka ary rano)
Fanoherana menaka tsara
Endri-javatra amin'ny fitaovana samihafa
NBR Mahatohitra tsara ny solika, be mpampiasa amin'ny faritra indostrialy
EPDM Fanoherana tsara ny toetrandro sy ny ozon, fanoherana tsara ny hafanana, ny hafanana ambany ary ny simika
NR Elastika avo, tanjaka simika tsara
CR Amin'ny ankapobeny ny fanoherana tsara ny ozon, ny fahanterana ary ny simika, ny toetran'ny mekanika tsara amin'ny mari-pana maripana
SBR Fiatrehana tohina, fampisehoana tsara amin'ny fametahana sy famehezana
Silisy Ny maripana fandrefesana malalaka indrindra, ny fahombiazana amin'ny mari-pana avo sy ambany, be mpampiasa amin'ny faritra famehezana sakafo
A: Izahay dia mpanamboatra, ny orinasanay hita any amin'ny distrikan'i Ren, tanànan'i Xingtai, faritanin'i Hebei.
F: Ahoana no ahazoana ny teny nalaina haingana?
A: Mandefa sary, fitaovana, habetsahana ary zavatra hafa takiana amin'ny alàlan'ny mailaka dia hahazo vidiny ianao atsy ho atsy.
F: Ahoana ny fomba hividianana teny nalaina nefa tsy nanao sary?
A: Azo atao ny mandefa santionany, sary na famaritana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra ho anay, haverinay ho anao ny sary ho fanamafisana.
F:Manana hevitra momba ny vokatra vaovao aho, saingy tsy azo antoka raha azo amboarina io. Afaka manampy ve ianao?
A.Ie! Faly foana izahay miara-miasa amin'ireo mpanjifa mety hanombanana ny fahaizan'ny teknikan'ny hevitrao na ny volavolanao ary afaka manome toro-hevitra momba ny fitaovana, ny fitaovana ary ny vidiny azo apetraka.
F:Ny vokariko manokana dia efa novolavolaina tamin'ny CAD. Afaka mampiasa ny sary ve ianao?
A.Ie! Ny rakitra DWG, DXF, IGES, Solidworks ary Rhino dia azo ampiasaina hamoahana teny nalaina, maodely ary fitaovana bobongolo - afaka mamonjy fotoana sy vola amin'ny famokarana ireo faritrao io.
F: Karazana plastika / fingotra inona no mety indrindra amin'ny volavola / vokariko?
A.Ny fisafidianana ny fitaovana dia miankina amin'ny fampiharana ny volavolanao sy ny tontolo iasany no hiasa. Faly izahay miady hevitra momba ny safidy hafa ary manome soso-kevitra ny fitaovana tsara indrindra.
F: Ahoana ny fomba hahazoana santionany?
A:Azo alaina maimaimpoana ny santionany maimaimpoana ho anao, saingy tokony handoa ny entana ianao. Mikasika ny vokatra namboarina, ny santionany sy ny lamina bobongolo no handeha alohan'ny famokarana betsaka.
Teo aloha: Sombom-bary vita amin'ny satroka vita amin'ny fantsom-paty
Manaraka: Tady famehezana mekanika
Tady fametahana kofehy vita amin'ny kofehy
Fanapahana ny toetr'andro amin'ny tataotra vita amin'ny lava
Fametahana famehezana mekanika (2)
Tady am-baravarankely sy varavarankely